अनलाइन ब्ल्याकजेक अभिलेखहरू | PoundSlots क्यासिनो साइट - £ २०० जमा बोनस!
शीर्षक: BJPro MonteCarlo एकलह्यान्ड
BJPro MonteCarlo एकलह्यान्ड
शीर्षक: प्रिमियर बहु-हात ब्ल्याकजेक
प्रिमियर बहु-हात ब्ल्याकजेक
सब भन्दा मनपर्दो क्यासिनो खेलको बारेमा एक संक्षिप्त
इक्वीसको रूपमा चिनिने एक तुलना कार्ड खेललाई ब्ल्याकज्याक भनिन्छ जुन विश्वमा क्यासिनोभरि खेल्दछ। अन्तिम स्कोर २१ को नजिक हुनुपर्दछ र यो भन्दा बढि हुनु हुँदैन। यस्तो तरिकाले खेल खेल्नुहोस् कि डिलरले थप कार्डहरू निकाल्नु पर्छ ताकि उसको पोइन्ट २१ भन्दा बढी भयो। एक वा बढी डेक 52२ कार्डहरू तपाईले यो टेबुल खेल खेल्नु पर्छ।
यसमा किंग, रानी वा ज्याक भएको कार्डहरूलाई फेस कार्ड भनिन्छ र प्रत्येकमा १० पोइन्ट राखिन्छ। अन्य कार्डहरू त्यसमा प्रदर्शन गरिएको संख्याबाट निर्धारण गरिन्छ जबकि Ace कार्डको १ वा ११ को मान छ। पाउण्ड स्लट क्यासिनोमा यस खेलको बिभिन्न संस्करणहरूमा तपाईंको हातहरू लिनुहोस्।
पाउण्ड स्लट क्यासिनो ले तपाईंलाई ब्ल्याकज्याकको सर्वश्रेष्ठ ल्याउँछ
यो क्लासिक ब्ल्याकजेक, प्रत्यक्ष ब्ल्याकज्याक, प्रिमियर ब्ल्याकजेक वा मल्टि-ह्यान्ड ब्ल्याकजेक हाम्रो क्यासिनो तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो भण्डारमा छ। हाम्रो क्यासिनोले आफ्ना ग्राहकहरूलाई पहिलो जम्मामा 1 / € / $200 सम्म 100% स्वागत बोनस प्रदान गर्दछ। यदि तपाई अझै पनी कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि कुन एकले तपाईलाई उत्तम रुचाउँछ, अगाडि बढ्नुहोस् र यस टेबल गेमका बिभिन्न संस्करणहरू अन्वेषण गर्नुहोस् जुन हामीसँग छ र होम हेभ्टी जित लिन्छ। सबै भन्दा राम्रो सफ्टवेयर प्रदायक द्वारा ईन्जिनियर गरिएको, यो जेबलाई गर्ने व्यवहार हो र तपाईंको समयलाई प्रयोग गर्ने उत्तम विधिहरू मध्ये एक हो।
पैसा कमाउनुको साथै तपाईले प्रत्यक्ष क्यासिनोको भावनाको आनन्द लिन पनि पाउनुहुनेछ, यसले पक्कै पनि तपाईंलाई लोभ र मनोरन्जन गर्दछ। ब्ल्याकज्याक एकमा समावेशीकरण गर्ने सबैभन्दा आकर्षक खेलहरू मध्ये एक हो र संस्करण जेसुकै होस्, ती सबैलाई प्रयोग गरेर निश्चित गर्नुहोस्। तपाईलाई पर्खिरहेका बोनस र पुरस्कारहरू पनि विशाल छन्; यदि तपाइँ यो ठीकसँग खेल्नुहुन्छ भने हाम्रो क्यासिनोले तपाईंलाई आकर्षक पुरस्कारका साथ स्नान गर्नेछ।
टर्मिनलहरू र दिशानिर्देशहरू तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ जब तपाईं यो २१ को यात्रामा हुनुहुन्छ
सुरुमा, यो तुलना कार्ड खेलमा, तपाईं दुई कार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंसँग चार विकल्पहरू छन्। तिमी सक्छौ:
हिट- डिलरलाई अर्को कार्डको लागि सोध्नुहोस्;
दुई पटक तल- शर्त बढाउनुहोस् जुन खेलाडीले सुरुमा 100% द्वारा तय गरेको छ;
खडा - कुनै थप कार्ड कोर्नुहोस्;
समर्पण- यदि डिलर एक ब्ल्याकजेक को लागी बोलाएको छ र
विभाजन- यदि प्लेयरसँग उही मानको दुई कार्ड छ।
खेलाडीहरूले खेलको बारेमा निर्देशनहरू पढ्न सक्दछन् यस खेलसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने बारे अझ स्पष्टता प्राप्त गर्न।
स्पेनी २१ र पोन्टुन जस्ता अन्य क्यासिनो खेलहरू ब्ल्याकजेकबाट प्रेरित छन् र यो तालिका १ 17 औं शताब्दीदेखि नै खेलिएको छ। खेलाडीहरूले टूर्नामेंट फारममा पनि खेल्न सक्छन् जुन धेरै प्रतिस्पर्धीहरूलाई सामेल गर्दछ। यसको टूर्नामेन्ट संस्करणले तपाईंलाई प्रत्यक्ष क्यासिनोको मुडमा जान मद्दत गर्दछ। धेरै समय अघिदेखि पुस्तकहरू र साना जमघटहरू मार्फत, त्यहाँ यस खेलको ईतिहासको लेनको उल्लेख छ।
अझै पक्का छैन यदि तपाईं कार्डको यस खेलमा खोजी गर्न चाहनुहुन्छ भने?
पाउण्ड स्लट क्यासिनो ले तपाईंकोलागि ब्ल्याकज्याकको भावना, रमाईलो र खुशीयाली ल्याउँछ। सबैभन्दा लोकप्रिय क्यासिनो खेलहरू मध्ये एक जसलाई व्यापक प्रशंसा प्राप्त भएको छ पनि डेमो संस्करण अनलाइन छ। जुनसुकै संस्करणको होस्, हाम्रो क्यासिनोसँग नि: शुल्क प्ले संस्करण छ, जसमा तपाईं आफ्नो शर्त ठीक गर्न सक्नुहुनेछ र डलरलाई पैसा लगानी नगरी हराउन सक्नुहुन्छ।
हाम्रो क्यासिनोमा तपाईंको पहिलो निक्षेपका लागि, तपाईंलाई पुरस्कार बोनस दिइनेछ, यसैले यकिन गर्नुहोस् कि तपाईंले आफैंलाई कार्डको संसारमा हराउनुहुनेछ र ठूलो पैसा कमाउनुहुनेछ। अनुभवी वा उन्नत, २१ सँग विभिन्न प्रकारका भेरियन्टहरू छन् जुन यसका सबै खेलाडीहरूलाई सूट गर्दछ। तपाईं या त डाउनलोड गर्न वा तुरून्त खेल खेल्न सक्नुहुनेछ र यस टेबल गेमको उत्साहको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।